လားရှိုးနှင့် နမ့်ခမ်း တို့တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ဗုံးများ လက်လုပ်ဗုံး များဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးပြော
ပို့စ်တင်ချိန် - 6/03/2014 06:35:00 PM
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂- မေလအတွင်းက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့တို့ရှိ ပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်သော တရားခံ များကို ဖော် ထုတ်ဖမ်းဆီးရန် ခက်ခဲမှုများ ရှိနေ သော်လည်း ပေါက်ကွဲသည့် ဗုံးအမျိုး အစားများမှာ လက်လုပ်ဗုံးများဖြစ် သည်ဟု အကြမ်းဖျင်း အတည်ပြု သုံးသပ်ထားကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက သုံး သပ်ပြော ကြားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူက ''လက်လုပ်ဗုံးလို့ သုံး သပ်ပေမယ့် မေလထဲမှာ ရှမ်းပြည် နယ်မှာဖြစ် တဲ့ ပေါက်ကွဲ မှုနှစ်ခု က သံသယဖြစ်စရာလူဆိုတာ ရှာမရသေး ဘူးဖြစ်နေတယ်။ လက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့တွေထဲကလို့ သုံးသပ်ရမှာပဲ။ ရှမ်း ပြည် နယ် မှာက ပေါက်ကွဲမှုတွေတော့ မကြာခဏဖြစ်နေကြပဲ။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကလဲ များတော့ တရားခံ အစရှာရရင်တောင် ဖမ်းဖို့တော်တော် ခက်ခဲတယ်''ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
လားရှိုးတွင် မေ ၁၈ရက်က ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သည့်နေရာတစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- မမ(လားရှိုး)
လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်အရ ယင်းလက်လုပ်ဗုံး များမှာ သံစတော်တော်များများပါ ဝင်ပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ထိန်းချုပ် ဖောက်ခွဲနိုင်သည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခု လည်းပါဝင်သည်ကို တွေ့ရ ကြောင်း သိရ သည်။ အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ် ဌာနချုပ် မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦးက ''ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေအ နေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၂၀၁ဝခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲ တွေ ဖြစ်လာတာ တွေရှိနေတယ်။ ဒေသတွင်းမှာ လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လှုပ်ရှား မှုကလဲ များလာတဲ့အတွက် ဗုံးပေါက် ကွဲတာတွေကလဲ မဆန်းဘူးလို့တောင် ဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့ ဒီပြည်ထောင် စုလမ်းမတစ်လျှောက် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်သွားလာနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အဖို့ အထူးသတိထားစရာဖြစ်နေ တယ်''ဟု ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်း တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA)၊ ကချင်လွတ် မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA)၊ MNDAA ကိုးကန့်အဖွဲ့ စသည့် အပစ် မရပ်သေးသည့် လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ များအပြင် ရှမ်းပြည် တပ်မတော်တောင် ပိုင်း RCSS ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်းစသည့် အပစ်ရပ်တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ လည်း ရှိနေပြီး မူဆယ်-မန္တလေး ကားလမ်းအနီးတွင် ဝင်ရောက်လှုပ် ရှားမှုများလည်း ရှိနေသည်။
မေ ၁၆ရက်က လားရှိုးနှင့် မေ ၂၈ရက်က နမ့်ခမ်းတို့တွင် ပေါက်ကွဲ မှုများ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားရာ နမ့်ခမ်းမြို့ နယ် နောင်ခမ်းကျေး ရွာနှင့် ကောင်း ဝိန်းကျေးရွာကြားတွင် ထောင်ထား သောဗုံး ကြောင့် မော်တော် ဆိုင်ကယ် စီးနင်းလာသော မူဆယ်မြို့နယ် နမ် စန့်ကျေးရွာမှ ပြည်သူနှစ်ဦးမှာ တစ် ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးမှာ ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
[--Democracy today Daily Newspaper--]
ယူကရိန်းအရှေ့ဖက်ဒေသ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်ဆဲ
သျှမ်းပြည်နယ် ဒေသခံများ၏ လယ်ယာခြံမြေများအား တရုတ်န...
တာမွေမြို့နယ်တွင် ယာဉ် (၅)စီးဆင့်ကဲတိုက်မိ
လူချင်းတိုက်မိခဲ့သည်ကို မကျေနပ်သဖြင့် စကားများရန်ြ...
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး သိမ်းဆည်းခံ လယ်မြေမျ...
သုံးခွမြို့၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံ မှ ကွမ်းစားသူ ၁ဝဝ ၌ ၃၄ ဦးနှုန်း ခံတွ...
ရွှေဈေးကျနေ၍ ဝယ်ယူစုဆောင်းခြင်း မပြုသင့်ဟု ရွှေလုပ်င...
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ် မေမြတ်နိုးနှင့် မေးမြန်းချက်
မဲဆောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံရ
ထားဝယ်လယ်သမား ၂၀ ကို မြို့နယ်ရဲစခန်းက ခေါ်ယူစစ်ဆေး
Paternity Determination မိဘ စစ်-မစစ် စစ်ဆေးခြင်း
ပြင်ဆင်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် အသစ်ပြန်ရေးရမည့် ဥပဒေ ...
Qualified Response အဆင့်မြင့်မြင့် ဆန့်ကျင်ကြပါ
Blood sugar levels ဆီးချိုစစ်ခြင်း
Penis enlargement Risks ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့အန္တရာယ်တွေ
ခွေးချစ်သူနဲ့ ကြောင်ချစ်သူတွေကြားမှာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်...
လားရှိုးနှင့် နမ့်ခမ်း တို့တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် ဗု...
အသိမ်းခံလယ်များမှာ မထွန်ယက်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ တားမြစ်
မှတ်ဉာဏ်ကောင်းစေတဲ့ ဆေးဝါးများက ကလေးငယ်များရဲ့ ဦး...
ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များအတွက် ဟိုတယ်အဆင့် ရှိ အဆေ...
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ပိုင်ဈေးလိုင်စင်အသစ် လှေ...
တရားမ၀င်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ ရောင်...
ဆေးရုံနှင့် ကျောင်းများ၌ Telecenter ပေါင်း ၅ ထောင်...
စူပါ ပါးလွှာမူနဲ့ ဂိမ်းမင့် လပ်တော့ ASUS' GX500
အစိုးရ၏ စစ်တပ်က ထိုးစစ်ကြောင့် တိုက်ပွဲများ နေ့စဉ်...
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းစစ်ဆေးယာဉ်အား လေးခွဖြင...
တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ပုဒ်မ ၄...
ကောက်ရ ဆင်းကဒ်အလွတ်ကို ရဲစခန်းသို့ လာရောက်အပ်နှံသည...
အီရန်နိုင်ငံမြို့တော် တီဟီရန်တွင် သဲမုန်တိုင်းတိုက...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဥတ္တရာပရာဒေ့ရ်ှတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက...
ပြည်ပခရီးသွားလိုင်စင် အာမခံကြေး ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ပေး...
ခရီးသွားဘလော့ဂါတစ်ဦး ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့ရှိ ခရစ...
လမ်းလျှောက်နေသော ရဲ နှင့် ကားပေါ်က ရဲ တာဝန်မတူကြရော...
ကော်မရှင်သတိပေးချက် အန်အယ်လ်ဒီ ပယ်ချ
စွန့်ပစ်လေ့ရှိသော စားစရာအစိတ်အပိုင်းများ ကျန်းမာရေ...
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စု(စ) သုံးသပ်ချက်
ရခိုင်တောင်ပိုင်းကို ဇွန်လ၀က်တွင် လျှပ်စစ်မီးပေးမည...
မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင် ၉၁ အရွယ် အမျိုးသမီး အမေရိကန်စံ...
မာကြီးရှည်ရိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကို ဘိုဖြူ ဘာ့ကြောင့် လျော...
ဒေါ်လာ ၃၀၀ တန် ဖုန်းကို ဆယ်ရင်း အမေနဲ့သား အသက်ပျောက...
တက်တူးမထိုးကြသူ လူငယ်အနုပညာရှင်တို့ ခေတ်အတွေး၊ ခေတ...
ချဉ်စပ်ဆိမ့်တဲ့ ရှမ်းအမဲသားထောင်းနဲ့ ဆာခုပ် အမဲတွင...
ကိုရီးယား မင်သားနဲ့ ရုပ်တူချင်လို့ ၁၀ ကြိမ် ခွဲစိတ...
KBZ အသင်း နည်းပြချုပ်အဖြစ် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဟောင်း...
Unilever ကြော်ငြာ စစ်တွေမှာ ပြန်ဖြုတ်ခဲ့ရ
အစိုးရပါဝင်ခြင်းမရှိပါက တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ဈေး...
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ အာရှဒေသဆိုင်ရာဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံလ...
ဒုတိယ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေါ်လာနိုင်ဟု ဦးတင်ဦး ပြော
အတိက်ကအမှားကို ထားပြီး အမှန်တရားဆီသို့ ချီတက်ပါ
ယာဉ်မတော်တဆတိုက်မှုကြောင့် တာချီလိတ်၌ ကျောင်းအုပ်ဆရ...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြဿနာမှာ ကြုံတွေ့နေကျ ပြဿနာသာ ...
လက်ပံတောင်းစီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေသည့် တာဝန်ရှိသူမျာ...
ရခိုင်ရှိ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များအတွက် လ...
ဘင်္ဂါလီအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ပြီး သုံးဦးဒဏ်ရာရ
မဟာချိုင် မြန် မာလုပ် သားတွေ အခြေအနေ
အရည်အပြား ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး တွေ့ရှိ
အမေရိကန်စစ်သည်နှင့် တာလီဘန် ၅ ဦး လဲလှယ်ရေး ညှိနှို...
စပိန်ဘုရင် ဟွမ် ကားလို့စ် ထီးနန်းစွန့်ပြီ
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ ကိစ္စ စုံစမ်း
ရွှေတြိဂံဒေသတွင်း နိုင်ငံများအနက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ...
အရည်အသွေး မပြည့်မှီသည့် လမ်းခင်းမူအပေါ် ကန့်ကွက် ဆန...
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွင် ရေရှည်စီမံကိန်း မရှိကြောင...
ထိုင်းစီးပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ထိုင်းစစ...
ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းနဲ့ ပြန်လည် လက်တွဲပြီး အနုပညာ လုပ်...
ရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက် ရွေးပြီးမှလက်ခံတဲ့ ပြေတီဦး
ကမ္ဘာထက် ၁၇ ဆ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာအကြီးစားတစ်ခုကို...
လူတစ်ယောက်ကို ဟန်ဆောင်ပြုံးပြလိုက်ခြင်းဟာ သင့်ကိုဝ...
ဒေါပုံမြို့နယ် နွယ်အေးရပ်ကွက်တွင် နေအိမ်သုံးလုံး မ...
ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲက အစိုးရအိမ်တော်ကို မသုံးဘဲ စစ...
ရွှေတြိဂံနယ်မြေ ဘိန်းအထွက် ၂ ဆပြန်တိုး
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကုမ္ပဏီမီးရှို့မှု စွဲချက်တင်ရန် အ...
တောင်ပြာတန်းယာဉ်လိုင်းကို အရေးယူပေးရန် မီးလောင်သေဆ...
စောနေတိုးကို ဘီးလင်းတွင်သုံးကြိမ် သွားဖမ်းသော်လည်း...
အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ သတ်မှတ်မှု စက်တင်ဘာလတွင် ကြေညာမည်
မြန်မာအလုပ်သမားများ ကားမှောက်၊ ၂ ဦးသေ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ မျက်နှာကို ဖြူဖွေးအောင် လုပ်...
၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲအတွက် မသမာမှု မလုပ်ခဲ့ဟု ကာ...
သံလွင်မြစ်ရေကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တူးမြောင်းဖြင့် ...
Box Office ထိပ်ဆုံးနေရာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် Malef...
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မပြနိုင်ပါက မောင်တောသို့ ဝင်...
မောင်နှမ နှစ်ဦးအား ရန်ရှာတိုက်ခိုက်သူ လူတစ်စုအား ...
ကိုယ့်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စမို့ပါ - ဟာသ
Morning sickness ကိုယ်ဝန်ရှိစ အိပ်ရာထရောဂါ
ယူသင့်သောမိန်းမ (၁၀) မျိုး
သေးပန်းလိုက်ရာကနေ ဓာတ်လိုက်သွားတဲ့ ခွေးလေး
ဘန်ကောက်တွင် စစ်တပ်နှင့် ဆန္ဒပြသူများ လိုက်တမ်းပြေး...
လူကြီးမင်း ဒုက္ခ ကင်းစေလိုသည်